Izvo zvese zvakatanga sekirabhu yebhuku.
Hongu ndiri kurevesa. Ndakatanga basa rangu pawebhu anopfuura makumi maviri emakore apfuura. Saiti yangu yekutanga yaive saiti inonzi Kubatsira Ruoko iyo yakarongedza nzvimbo dzakanakisa kubva kutenderera padandemutande kubatsira vanhu nemakomputa avo uye nekufambisa zviwanikwa paInternet. Makore gare gare ndakatengesa dura kune imwe kambani yakabatsira vanhu kurega kusvuta, imwe yekutanga yangu guru zvibvumirano.
Ini ndakatanga kublogga pa blogger uye ndakaisa nhetembo nezve zvese kubva kune zvematongerwo enyika kuenda kune zvishandiso zveInternet. Ini ndaive ndakazara nzvimbo uye ndainyora zvangu - pasina vazhinji vevateereri. Ini ndaive wechikwata cheKushambadzira Bhuku muIndianapolis iyo yakakurumidza kukura kubva mukutonga. Nekufamba kwenguva, ndakazoona kuti vazhinji uye vazhinji veboka iri vaiuya kwandiri kuzowana tekinoroji kuraira. Iko kusanganiswa kwetekinoroji yangu kumashure uye bhizinesi rangu uye kushambadzira maacumen anga achidiwa zvakanyanya sezvo Internet ichikurumidza kuunza shanduko kune indasitiri.
Mushure mekuverenga Kukurukurirana Wakashama, Ini ndakakurudzirwa kuita zviri nani brand uye kudzora zvirimo pane ino saiti. Ini zvakare ndaida kumwe kutonga pamusoro pekutaridzika uye kunzwa kweblog rangu, saka ndakaenda kune yangu domain, dknewmedia.com, mu2006 uye ndakavaka yangu yekutanga WordPress saiti. Sezvo ini ndaive ndakatarisisa kushambadzira tekinoroji, ini ndanga ndisingade iyo domain ine zita rangu kuti ipinde munzira, saka ndakafambisa saiti (zvinorwadza) kune yayo nyowani domain muna 2008 uko kwaakakura kubva ipapo.
The Martech Zone ndeye uye inoshandiswa ne DK New Media, agency ini yandakatanga muna 2009. Mushure mekushanda pamwe neese makuru epamhepo ekushambadzira dhipatimendi munguva yangu kuExactTarget uye kuvhura Kuwedzera, Ini ndaiziva kuti kwaive kudiwa kukuru kwehunyanzvi hwangu uye nhungamiro mukati mekambani yakaoma kudaro.
DK New Media ikambani yangu yemunhu inotarisa zvinyorwa zvangu, podcast, mashopu, webinars, uye magigs ekutaura Highbridge ndeangu Salesforce Partner agency izvo zvinobatsira makambani kuwedzera mari yavo paSalesforce neMarketing zvigadzirwa. Isu tinopa kusangana, kutama, kudzidziswa, kubvunza zvine hungwaru, uye kusimudzira kwetsika.
Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu mumakore apfuura!
The Martech Zone inobatwa ne Flywheel yakabata WordPress kuitisa uye isu takabatana.